SourceTrack: Raadinta Wicitaanka Dynamic ee Shirkadaada | Martech Zone
SourceTrack: Raadinta Wicitaanka Dynamic ee Shirkaddaada
Arbacada, December 19, 2012 Arbacada, December 19, 2012 Douglas Karr
Waxaan la shaqeynaa shirkado badan oo waaweyn, caqabadda sii socotana had iyo jeer waa sida loola socdo sida hoggaamiyeyaashu u gaarayaan ganacsigooda. Inkasta oo ganacsiyada iyo macaamiisha ay baarayaan oo ay ka helayaan shirkado badan khadka tooska ah, wali taleefanka ayey ka qabtaan markay doonayaan inay ganacsi sameeyaan
Dhibaatadu waxay ahayd inaan ogaanay in gebi ahaanba beddelkeennii ay ka dhacayeen gudaha kale qaybta. Waxay galayeen weedh ku habboon, laakiin aan laga fileyn raadinta. Fursadaha in tani ay la mid tahay bartaada… waxaa jira kumanaan ama tobanaan kun oo ereyo isku dhafan oo wadista taraafikada. Laba ka mid ah macaamiisheenna, waa boqollaal kun oo ereyo-fure ah!
Ma jiraan lambarro taleefan oo ku filan oo lagula socdo mid kasta oo ka mid ah, laakiin mid casri ah gelinta lambarka taleefanka firfircoon nidaamyadu si sax ah ayey ula socon karaan. Tiro lambarro taleefan ah oo go'an ayaa la dejin karaa oo dib loo cusbooneysiin karaa goobta iyo sidoo kale isku xirnaanta ereyada muhiimka ah Tani waa waxa lagu fuliyay nidaam sida SourceTrak oo ka socda IfbyPhone.
Iyadoo XigashoTrak, waxaad ku dari kartaa koox-kooxeedyo gaar ah oo ereyada muhiimka ah oo si firfircoon u beddelaya lambarka taleefanka. Nidaamku wuxuu markaa diiwaangeliyaa wicitaanka wuxuuna diiwaangeliyaa kooxda ereyga muhiimka ah ee wicitaanku ku yimid. Waa nidaam si fudud loo adeegsado oo ka caawin kara shirkad kasta inay fahamto halka hoggaankoodu ka imaanayo.
Tags: raad raadingelinta lambarka taleefanka firfircoonifbyfoonraadinta wicitaanadaliin dhanaan
Qorshee, Wadaag, Wada Shaqee oo Faafi Shaqada Hal-abuurka ah
Isbeddellada 2012 ee Internet & Mobile